Taiwan: Boky, mpanoratra ary ampahan-tsary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Janoary 2009 18:36 GMT
Vakio amin'ny teny srpski, Français, Español, English
Isaky ny alahady ao amin’ny gazety China Times (中國時報) any Taiwan, betsaka ny mpamaky miandry ny pejy roa manome tatitra fohy momba ny boky. Isaky ny faran’ny taona, ireo tonian-dahatsoratra dia milaza ireo nofinidiny ho “Bokin’ny taona” (開卷好書獎), ny boky sinoa tsara indrindra navoaka tany Taiwan tamin’iny taona iny. Nanomboka tamin’ny 2006, manomana “ampahan-tsary momba ny boky” ihany koa io gazety io ho an’ireo mpanoratra nahazo fankasitrahana, ka maneho ny asan'izy ireny amin’ny soratra, feo sy sary.
Tamin’ity taona ity dia mpanoratra 11 no nasaina handray anjara ao anatin-na ampahan-tsary, isan’izany ireo mpanoratra tantara foronina, ireo mafana fo (activists), ary ireo mpanoratra “andrana”. Any Ireo mpanoratra ireo dia mizara ny fomba fijeriny sy ny vina momban’ny asa sorany, sy izay tiany ampitaina amin’ny alalan’ny sorany. Na dia amin’ny teny sinoa daholo aza ireo ampahan-tsary ireo, antenaintsika fa ho afaka mandika sy mamerina ny tontolo voizina sy iainana ao anatin’ireo asa soratra ireo. Any amin’ny faran’ny ampahan-tsary tsirairay avy, misy feo miteny sy manome toky fa ireo dia “Boky tsara, ary tsara hovakiana”.
Ireto manaraka ireto dia ampahan-tsary nofantenana ary nasiako dikateny avy amin'ny fitantaran’ireo mpanoratra.
Ao amin’ny Plastic Opium, ilay mpanoratra Xia Chuan-Wei (夏傳位) dia mamboraka ny fiantraikan’ny “cartes de crédits” sy ny “cartes de débits” amin'ny fomba fijerin’ny vahoaka, ny taha midangana tafahoatra atao amin'ireo mpampiasa azy ireny, ary ny fanavahana mihatra amin'ireo mpisambotra rehefa tafalatsaka ao anatin'ny fandriky ny carte de crédit. Ato anatin’ity ampahan-tsary ity ianao dia afaka mahita ireo distrika misy tsena goavana ao Taipei. Miteny toy izao ny mpanoratra ato anatin’ny ampahan-tsary:
[…] Mila mametra-panontaniana lalina mihitsy ny fiaraha-monintsika: Hoatrinona ny tombony voaangon'ny Banky nefa sady tsy ho tompon’andraikitra amin’ny fiantraikany sy izay ho vokatr’izany akory? Inona no tokony hatao hanampiana an’ireo mibaby trosa mba hahita indray ny toerany teo amin’ny fiaraha-monina sy hanombohany fiainam-baovao? taorian’ny nandraisany ny andraikiny? Ahoana no fomba hanaikàntsika ny governemanta mba ho tompon’andraikitra ary hametraka ny lalàna sahaza izany? Ahoana no hamaritantsika ny “rariny ara-bola” mba ahafahan’ny olon-drehetra mahazo ny loharanom-bola hampivoarany ny asany sy ny fiainany.
Ilay mpanoratra Gu Yu-Ling (顧玉玲) dia mpitolona mafana fo hatry ny ela ho an’ny zon’ny mpiasa mpifindra monina. Us dia boky mirakitra ny tantara-na mpiasa mpifindra monina Filipiana maro. Taiwan dia nampiditra mpiasa mpifindra monina maro avy amin’ny firenena any Asia Atsimo Atsinanana, toa an-dry Indonezia, Filipina, Tailandy sy Vietnama, nanomboka tamin’ny 1990. Hoy ny fomba filàzany manokana ao anatin'ny ampahan-tsary:
[…] Raha toa hisy fiantraikany eo amin’ny fiaraha-monina io boky io dia manantena aho fa ho fitaratra hanampy antsika hifampijery izy. Niezaka ny hanohitra isika, hihira sy handihy, ary ho henoin'ny vahoaka sy hisarika ny fampahalalana vaovao. Amin’ny alalan’ireny fomba rehetra ireny, na mora na sarotra, niezaka ny hifampiresaka amin’ny fiaraha-monina fotsiny isika. […] Mitandrin-tena foana aho manoloana ireo mpamaky rehefa manoratra. Manantena aho fa tsikaritry ny olona izany. Manantena aho fa azon’ny olona hoe tena zava-mitranga any Taiwan ireny tantara ireny. Mpifanolo-bodirindrina aminay ireo mpiasa mpifindra monina, nefa maro no miteny fa tsy misy izy ireny.
The End of River
Amin'ny maha-taranaka voalohany amin'ny mpanoratra Maleziana-Sinoa any Taiwan, Li Yong-Ping (李永平) dia nanoratra ilay tantara miaraka amin'i Borneo sy Malezia ao an-tsainy ao, nefa mipetraka any Taipei, Taiwan. Hoy izy milaza:
Mpanoratra tantara foronina aho. Ny mpanoratra tantara dia tokony hanana ny fahaiza-manao hampivadiana tontolo roa samy hafa. Rehefa manokatra ny varavarankelin’ny biraoko aho dia mahita ny reniranon’i Dan Shuei eto Taiwan, nefa izaho manoratra tantara momba ny renirano any Borneo. Ao anatin’ny saina mpanoratra, ireo renirano roa ireo sy ireo sehatra roa ireo dia mifandray amin'ny fomba mahagaga. Noho izy ity mitombo fatratra, dia mitambatra ireo renirano roa ireo. Farany dia sarotra be ny manavaka hoe momba ny reniranon’iza marina no tena soratako. Izany no traikefa tsara indrindra amin’ny asa fanoratana, izay sarotra ampitaina tokoa. Na izany aza, ireo mpamaky mora mihetsi-po dia hahamarika izay tranga mahazendana izay.
Raha te-hijery ireo ampahan-tsary 11, tsidiho ny pejy ao amin'ny YouTube. Raha te-hamaky ny lahatsoratry ny ekipa mpamokatra ampahan-tsary, tsidiho ny Blaogy OpenBook [zh].